H & M Madhirezi enguva dzeZhizha - Mutengo wakaderera! | Bezzia
Iyo yakanyanya kuderedzwa H & M madhirezi ezhizha
Susana godoy | | Chii chandinopfeka
Madhirezi ezhizha anogara ari imwe yesarudzo dzakanakisa kupedzisa kwedu kwezhizha kutaridzika. Naizvozvo, ndeimwe yemapfekero akasarudzika uye akakosha muhembe yedu. Mune ino kesi, H&M inodawo kuve chikamu cheiyo yakakosha yekuratidzira yatinayo kwauri mumwedzi iyi.
Saka hapana chakafanana bheja pane akanakisa mafambiro, izere nemavara, mapatani uye akawanda mashiripiti. Kunyangwe zvese izvi pamutengo izvo zvichakushamisa iwe uye zvakawandisa. Ino inguva yekunakidzwa nezvose uye nezvimwe zvakawanda, kuti urege kupotsa pane ako madhirezi ezhizha.
1 Iyo midhi yezhizha uye madhirezi marefu kubva kuH & M ayo auchada
2 Akapfava uye akajaira madhirezi mapfupi
Iyo midhi yezhizha uye madhirezi marefu kubva kuH & M ayo auchada
Nehurefu hwakakwana, aya ndiwo marongero akaita seaya akamisikidzwa iwe auchazoda. Nekuti midi ndiyo inoshandura kuita yakawanda mabhenefiti ekunyaradza kwako uye yako inotonhorera maitiro. Izvi zvinoreva kuti isu tinofanirwa kugara tine modhi senge idzi paruoko. Sezvo mukati mavo iyo inoita kuti ubudirire ichagara yakamirira iwe.
Imwe yeinonyanya kufarirwa ipfungwa iyi. Nekuti isu tinonyatsoona magadzirirwo akaiswa pamberi pedu. Maitiro akasununguka aripo uye zvinoreva kuti tinogona kugara takasununguka nerusununguko rwekufamba. Ehezve, ndezve dhirezi refu asi rinogara rakakwana nemaitiro asina kujairika. Inoperekedzwa neruvara rwakasimba rinozovhenekera kwese kwazvinoitika. Nemabhanzi akapamhama uye yakawanda yekunyaradza.
ari satin uye madhirezi epateni Iwo zvakare mamwe emhando sarudzo idzo iwe dzausingakwanise kupotsa uye nekuwedzera mwaka uno. Neichi chikonzero, iyo yakasimba yakazvipira mukubatanidzwa kwemavara maererano nemaruva kana tropical motifs. Kunze kwekubheja pamabhande e thinnest uye machira akapfava anotora kupisa kubva kwavari. Chokwadi iwe uri kutofunga nezve kwaungaitora!
Akapfava uye akajaira madhirezi mapfupi
ari madhirezi mapfupi Izvo zvakare zvimwe zvezvikamu zvikuru zveimwe fashoni yakakosha munyu wayo. Neichi chikonzero, H & M yanga isinga sarirwe kumashure mune izvi uye kubheja pamicheka yakapusa asi nguva dzose inowirirana nemafambiro azvino. Saka, kutanga ne, hapana chakafanana nekubvarura. Icho chimwe chezve chakakumbirwa uye humbowo hweichi ndechekuti iwe unogona kuzviwana mune akasiyana mavara, akasimba uye nekuvhurika pamativi, izvo zvinopa iyo nyowani uye yakanyatsobatanidzwa chimiro.
Ehezve, kana iwe uchiri kuchida ipfupi, ipapo uchave nacho neicho chakapesana chimiro. Isu takanunura imwe yemadhirezi ezhizha anogara achifarira. Iko kucheka kwakaputika, kunozoita kuti siketi yako ive neimwe vhoriyamu iyo yatinoda uye ine shavishavi maoko ayo anopawo mwenje vhoriyamu kunharaunda ino. Mune ino kesi, iwe unogona kunyange kuitora kune zvimwe zvakakosha zviitiko kana kugadzwa. Kune izvi iwe unongoda kubheja pane izvo zvekushandisa uye wozvibatanidza zvinoenderana nemaitiro ako.
Imwe yemaitiro ayo anowanzoonekwa ari madhirezi mapfupi ane T-shati maitiro. Ehe, akapfupika-maoko, akagadzirwa nekotoni uye aine mamwe anodhindwa pachiso chayo chemberi chepakutanga kana neimwe mhepo yemazambiringa. Nekuti chete nenzira iyi ndipo patichakwanisa kuve nemaitiro akati wandei, kuti tikwanise kusarudza atinoda zvakanyanya uye iri rinogara riri zano rakanaka. Iwe haugone kugara usina madhirezi ezhizha nemuviri wehuchi nekuti anozokuperekedza masikati nehusiku, ndeimwe yemaitiro aya ari kutsvaira mumwe mwaka. Ndeupi waunonyanya kufarira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Chii chandinopfeka » Iyo yakanyanya kuderedzwa H & M madhirezi ezhizha
3 mishonga yekumba yezvitsitsinho zvakatsemuka